Ndị Macs anyị ọ ga-arụ ọrụ na APFS n'oge na-adịghị anya? | Esi m mac
Ndị Macs anyị ọ ga-arụ ọrụ na APFS n'oge na-adịghị anya?
Otu n'ime ozi ọma na Mac OS Sierra wetara anyị bụ ngwakọta nke usoro ọhụụ na draịva siri ike, dị ka anyị hụrụ na nkuzi gara aga. Ọ bụ mmalite nke njedebe maka usoro Apple, HFS + nke Apple webatara na 1998. Mana teknụzụ na-aga n'ihu yana SSD ọhụrụ na-enye ohere iji ndozi nke nchekwa na ọrụ.
Izu a anyị mụtara na ụdị nke iOS na-esote nwere ike itinye usoro faịlụ APFS ọhụrụ. O doro anya na, usoro ga-Ọkpụkpọ anyị iOS ngwaọrụ mgbe wụnye ọhụrụ version. Na ihe a niile na-enweghị adịkwa ugbu a ọmụma.
Na Macs ọ nwere ike ịbụ ihe mgbagwoju anya. Ihe dị iche iche na Mac na-emekọrịta ihe, nke ọ bụla nwere ike inwe usoro dị iche. Anyị na-ekwu maka osisi USB, mpụga draịva, mbipụta Time Machine. Ya mere, Apple ga-arụ ọrụ n'oge a na nkenke nke dọkịta na-awa.
N'ọnọdụ ọ bụla, anyị kwenyesiri ike na Apple na-arụ ọrụ na otu n'ime ihe ọ kachasị mma: na-eme ka ọrụ dị mfe ma dị mfe, na-enwe obere nsogbu ma ọ bụ nchegbu maka onye ọrụ ahụ.
Ozugbo etinyere usoro APFS na Macs, anyị nwere ike iji ndozi nke usoro a ga-ewetara anyị.
APFS dị ọsọ ọsọ karị karịa usoro nke ugbu a, na-ewere eziokwu ahụ na ọ na-akwado 64bits. Enwetara nsonaazụ ndị na-eme ka oge nzaghachi ka mma mgbe ị na-eme usoro. Ọ nwere ike ijikwa ọtụtụ ozi karịa obere oge.
Otu n'ime akwụkwọ akụkọ a ga - ekwu maka ihe kachasị ga - abụ teknụzụ «Okuku Nchedo " nke ahụ na-enye ohere ịchekwa onwe gị, inweta nchekwa wee si otú a na-ezere ọnwụ nke ozi nke njehie kpatara n'ihi ọnwụ ike.
Ọ dị nchebe, ekele ohuru data izo ya ezo.
Ihe data ahu di na adịghị oyiri faịlụ. Ya mere, anyị na-enweta ohere na arụmọrụ.
Otú ọ dị, ọ bụrụ na n'ihi ụfọdụ incompatibility na ị na-achọghị iji gị dum disk na APFS, usoro a -enye gị ohere inwe nkebi ndị ọzọ formats.
Enwere ọtụtụ ọrụ ndị ọzọ, mana ọ bara uru ichere iji mara miri emi etu sistemu ọhụrụ a si arụ ọrụ, yana ike ndị mmepe iji nweta usoro ihe ọhụrụ a.
Nwelite: Dị ka onye na-agụ akwụkwọ na-agwa anyị, Apple wepụtara APFS faịlụ sistemụ WWDC 2016 nke mmepe ikpeazụ, ebe a ị pụrụ ịhụ ngosi na zuru ezu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Ndị Macs anyị ọ ga-arụ ọrụ na APFS n'oge na-adịghị anya?
Isiokwu a nyere m ntakịrị egwu. Kedu ihe ga-eme ndị anyị nwere otu egwuregwu nwere SSD nke na-esighi ike?
Mgbe apụl kpughere APFS ọ kwuru atụmatụ ya na ọrụ ya, na na 2017 ọ ga-eru ngwaọrụ ya niile, yana etu usoro nwelite nkwalite si HFS + gaa APFS ga-adị, ọbụlagodi macOS Sierra nwere akụkụ nke APFS ma ha na-enye ngosi. Lee ogbako a https://developer.apple.com/videos/play/wwdc2016/701/
PS: Ana m atụ aro ka itinye vidiyo ma ọ bụ nwudo na mbipụta ahụ ebe ọ na-edozi ọtụtụ ajụjụ ma ọ bụ obi abụọ ị kwuru.
Edozi, ekele na ndo.
A na-agbatị usoro iji rie ụgwọ mgbasa ozi nke Storelọ Ahịa App
Mmanya, ngwa nke na-enye anyị ohere iji ngwa Windows rụọ ọrụ na Mac, ejiri ọtụtụ atụmatụ ọhụrụ emelitere